April 9, 2020 NEWS 1
MUQDIHSO(P-TIMES) – Golaha Wasiiradda ee Soomaaliya ayaa wada hadalo gaar ah oo ay yeesheen, waxay ka wada hadleen faafida cudurka Corone-Virus, sida ugu wanaagsan ee markale looga hortagi karro, iyadoo ay horey u xirnaayeen duulimaadyada gudaha iyo dibada ee dalka, balse ay hadda markale jirto cabsi xoog badan.
Warsidaha PuntlandTimes ayaa ogaaday jiritaanka in ay dhici karto Bandow guud oo lagu soo rogo caasumada Soomaaliya ee Muqdisho oo hadda ah meelaha ugu badan ee kiisaska ugu badan laga diwaangaliyey.
Laamaha Caafimaadka ayaa cabsi laga qabaa in laga waayo agabyada muhiimka ah, sida ay sheegayaan warar madax banaan oo laga helayo Ilaha caafimaadka, laakiin Xukuumadda ayaa dadaal badan galinaysa sidii loo heli lahaa agab caafimaad.
Sidaas oo kale welwelka ah in ay dad badan si qarsoodi ah ugu dhinteen xanuunkan ayaa ah mid sii kordhaysa, iyadoo dad kala duwan oo lasiiyey talo ah in ay tagaan Xarunta Isbitaalka Martiini ee Karantiilka la xaqiijiyey in ay geeriyoodaan.
Ka sokow tuhumada iyo amarada la filayo ee ah in ay Xukuumaddu soo rogto, haddana ma jiraan wax qaadashada shacabka, waxaana welwel laga muujinayaa sida ay ku sii socon karaan howlaha la dagaalanka kahortagida Corone-Virus, haddii aan xal deg deg ah loo helin.
Shacabka ayaa dhagaha ka fureystay baaqyada iyo Digniinaha xagga caafimaadka ah, waxaana muuqata in ay jirto halis la dhayalsanayo oo aysan dareensaneyn shacabka dalka oo dhan, gaar ahaana halka ugu badan ee hadda laga helay oo ah gudaha caasumada Soomaaliya.
Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya, waxay marar badan kucelisay in ay muhiim tahay in ay dadku guryahooda joogaan oo ay taxadar muujiyaan, laakiin sida muuqata dadku arrintaas ma dhageysan ilaa hadda geeridii u horeysay laga diwaangaliyey Soomaaliya.
Waa iska hadal ee nimanka leh waxbaan xakamaynaynaa xaggee bay xukumaan illaa xamar intiisa badan Shabaab baa ka talisee.Nimanka meesha ku shiraya xiray ku xiraysan yahiin oo ay Ajaanib ku waardiyeysaa.Xeradaas ay ku jiraan bay mushaarooyin ku qaataan.Meel ay wax ka qabtaana ma jirto.Hadalkooduna waa qawda maqashii waxna ha u qaban.